4 magirazi ezuva evakadzi 2022 ausingade kupotsa - THE INDIAN FACE
kudzidziswa / nhau
← Yapfuura / Tevere →
4 magirazi ezuva evakadzi 2022 haudi kupotsa
Muhupenyu, semumaadhiropu edu, pane runyorwa rwezvakakosha. Izvo izvo kana iwe usingafungire kuti zvinokuchengetedza pane inopfuura imwe chiitiko kuita kuti zvese zvive zvishoma zvishoma
Muchinyorwa chedu nhasi tinoda kukuudza zvimwe nezve mana ezvedu zvakanakisa kuunganidzwa magirazi ezuva evakadzi izvo zvatiinazvo The Indian Face zvako. Maodzanyemba eCalifornia anoratidzwa mune emazuva ano, avant-garde, matsva uye emhando mamodheru. 'Soma', 'Lombard', 'Laguna' uye 'Southcal' ndiwo mazita eaya mana maunganidzwa, akafuridzirwa nenzvimbo dzakasarudzika dzinoumba gungwa reCalifornia. Uye zvakare, takaona kuti hapana anokurudzira asingashandisi aya mamodheru atakakuunzira, saka unogona kukurudzirwa nemamwe maratidziro avanotakura kana vachishandisa aya magirazi.
Magirazi anotonhorera anotonhorera: Southcal Green
Kutsunga kutyora neyakagadzwa, ndozvinotumirwa kwatiri nemhando iyi yemagirazi ezuva. Kune avo vanotya kuwedzera rumwe ruvara kuchitarisiko, sezvo isu takadzidziswa kuti misiyano mumatoni eruvara anotangira pane nhema kusvika grey, asi hauwanzo kuona zviri pakati. Uye chokwadi ndechekuti pane zviuru zvezvisarudzo uye zvemahara masitaira ayo anotyora paradigm yekupa iyo 360º kutendeuka kune yako kutarisa.
Yedu 'Southcal Girini'Ivo vamwe magirazi egirazi, izvo zvakagadzirirwa kukwidziridza chero sitayera uye kujekesa kuti avant-garde uye kutsva ndiko kurongeka kwezuva. Nebhodhoro girini furu uye lenzi polarYakasimudzwa ita iyi modhi imwe yeinonyanya kudiwa. Iyo geometry yemagirazi inoonesa yakasarudzika square sikara, izvo zvinoita kuti uzviitire wega magirazi ehupenyu hwese, nekuti mhando iyi dhizaini haibude muchitaira uyezve kuti inonzwa yakanaka kwazvo zvisinei nechimiro chechiso chako uye ruvara rweganda rako.
Magirazi egirazi ane hunhu: Laguna Bi Magent
Kana icho chinangwa chezuva iri kukwezva kutarisisa uye kwete kuenda kusaonekwa, tiri kutaura nezve magirazi ezuva: 'Laguna Bi Magenta'. Aya magirazi echikadzi echimiro echimiro akafuridzirwa neLaguna Beach, California. Nguva imwe neimwe pavanova fanira kune vazhinji vedu zvipfeko, mukuwedzera kune dhizaini yavo, ivo vanoita kutaridzika kwekutanga kunogona kuenda kusingaonekwe mu nguo nehunhu hwakawandisa uye kunyangwe simba. Iko kusanganiswa kwetoni, pakati pebvupa uye magenta, inowedzera chimwe chimiro uye kutamba nerudo kune chitarisiko, sekunge kuti kwaizivikanwa kuti kunakirwa kunogara kuri padhorobha.
Uye unoziva chakanakisa pane zvese? Iye weavo vatinofarira vanokurudzira, Maria Pombo, anoda akavimbika mafuremu katsi-ziso bicolor. Tarisa uone kurudziro yekuti ungasanganisa sei yako 'Laguna Bi magenta' se Maria Pombo.
Magirazi eGeometric: Soma Nhema
Runako, kutakura uye chimiro. Ndidzo zvipikisheni zvakanakisa zvekutsanangura magirazi emadzimai aya. Chimiro chayo chakareruka uye lenzi dziri polarYakasimudzwa, pamusoro peizvozvo, hupamhi hwefuremu inokutendera iwe kuchengetedza nzvimbo yakakura yemeso, izvo zvakakosha kwazvo kudzivirira zvishoma kubva pakuonekwa kweakawonyana pano neapo. Vese vanopesvedzera vane mune yavo wadhihiropu XXL mhando dzemagirazi ane geometric mafuremu, kunyanya iwo magirazi matema izvo zvinotiyeuchidza zvishoma nezvechimiro chaVictoria Beckham, uye mune iyi kesi, anokurudzira Dulceida Iye anofarira kupfeka iyi mhando yemagirazi ezuva, nekuti anowirirana kumeso kwake zvakanaka uye anoratidzira yakasarudzika maitiro pamberi.
Kubata kwodziya kumeso:Lombard kamba
Iyo iconic Lombard Street muSan Francisco, inotitungamira kune yedu 'Lombard Tortoise' muunganidzwa. Kunge 'Soma Nhema', muunganidzwa uyu unobata XXL geometric furemu inotora nzvimbo yepakati kumeso kwedu kwese kwatinoenda. Chii chakakosha pane izvi, kunze kweizvozvo ivo magirazi ezuva evakadzi polarkusimudzwa, ndeyekuti chigaro chiri tortoiseshell mhando chinopa kudzikama kubata kune kutaridzika, sekunge dai taigara muzhizha nguva dzese.
Ndedzipi tsika dzeMagirazi echikadzi?
Mhando yefuremu iri kutakurwa uye iri kuseta maitiro ndiwo marudzi egirazi ane matema Cat-Maziso mafuru ezviso zvidiki. Uye kune zviso zvakakura, magirazi egirazi eXLL ane mageometric mafuremu ekuwedzera kuwedzera vanhu maficha.
Zvinorevei kuti magirazi ave ne'malenzi. ' Polarkusimudzwa '?
Izvi zvinoreva kuti malenzi egirazi ane firita inobvumira mwenje unobatsira chete kupfuura, uchitadzisa kufamba kwechiedza chinoratidzwa. Ndokunge, inovandudza zvakanyanya kugumbuka uye njodzi dzinogona kukonzerwa nekupenya kunouya kubva kune zvinhu zvinoratidzira, izvo zvinotibvumidza kuti tione zvakakwana panorama, neRefresh uye mavara echisikigo.
Chii chinonzi protection UV400?
Magirazi ezuva anouya nedziviriro UV400 Zvinowanzoreva kuti malenzi ane firita inochengetedza ese maUVA uye UVB mwaranzi, aya ari iwo anokuvadza zvakanyanya maranzi anokanganisa ziso remunhu. Iyo zita remazita '400' zvinoreva, kuti inodzivirira pakureba kwema 400 nanometer.
Chii chinonzi Cat Eye gomo?
Iyo 'Cat-Ziso' furemu, sezita rayo zvarinoreva, rudzi rwefuremu iyo inoteedzera kupindika kweziso rekati, ichisimudza chigaro chelenzi zvishoma. Magirazi magirazi akafanana neiyo 'Laguna', uye iyo 'Pacific' inomiririra iyi mhando yemagirazi.
Ndeapi magirazi ezuva anodiwa naMaria Pombo?
Iyo inofarira magirazi emhando yemhando yeanofuridzira iwo echinyakare mativi egirazi, pamwe neaya ane 'Cat - Ziso' furemu. Idzi ndidzo mhando mbiri dzegirazi dzinomira mushe mushe nemaitiro avo.
Rudzii rwemagirazi ezuva anopfekwa naDulceida?
Muzvinyorwa zvakati wandei tinogona kuona kuti iye anokurudzira anonamira kune akakura magirazi ejometri magirazi, ayo anowirirana kwazvo nechiso chake achipa ramangwana rekubata kumeso ake.
Nhoroondo ye baseball caps yakatungamira mukuzvarwa kweakaberekerwa ku ...
Uye iwe, wakaberekerwa chii? Tese tine chinangwa. Isu tinokuudza zvedu: isu takazvarwa kuti tinakirwe nerusununguko, kunakidzwa uye mutambo Ichi ndicho chikonzero, mune yedu chinyorwa pa
Magirazi egirazi evarume: Zvinoenderana nerudzi rwechiso chako
Isu tinoziva kuti zvakaoma sei pakutanga kusarudza magirazi ezuva anokodzera kumeso kwako uye hunhu. Ndokusaka nhasi tagadzira gwara nemitemo mitatu yekutanga, tevera yega